QODOBO WAXTAR LEH MALAB DUURJOOGTA, SIDA LOO HELO MALAB BEES DUURJOOGTA AH - MAQAALLO
Sida loo kala saaro malab ka beekhaamiska duurjoogta
Xitaa qof aan waxba u dhicin nacnac, garashada faa'iidooyinka malab, marmar waxay iibsanaysaa weel uu naftiisa ku jiido beteriyada iyo hagaajinta jirkiisa. Laakiin dad yar ayaa ogyihiin in ay jiraan nooc kale oo ka mid ah sheygan la yaab leh. Waxay ku saabsan beeska duurjoogta ah. Haa, haa, tani waa xaqiiqda ah macmacaanka oo dhan dhirbaaxo jacayl badan.
Malab duur ah, maxaa yeelay wuxuu yahay duur
Bees Wild waa ka duwan yahay shinni guri oo ku dhex nool beejka shinni. Waxay ku nool yihiin kalluunka geedaha kaynta, oo loo yaqaan dhinacyada. Goobaha noocaas ah waxay ku yaalaan meelo badan oo ka mid ah goobaha warshadaha kala duwan, waddooyinka.
Ma taqaanaa? Magaca kale ee malab shimbir ah waa bortovaya malab.
Raashinka Beeraha waxaay ka kooban yihiin maaddooyinka dabiiciga ah, oo ay ku jiraan waxyaabo kala duwan oo macmal ah oo beereedku inta badan ku daraan xayawaanka. Sida magaca ayaa tilmaamaya, malab duurjoog ah ayaa la yiraahdaa maxaa yeelay waxaa soo saaray shinni duurjoogta ah. Qiimaha malabku waa ka sarreeyaa sida caadiga ah, sababtoo ah:
malab duurjoogta ah ayaa sii adkaata;
waxaa lagu ururiyaa xaddad xadidan;
faa'iidadiisa ay ka badan tahay tan malab caadiga ah.
Qodobo waxtar leh malab duurjoogta ah, iyo sida loo qaato
Alaabta ganacsigu waxay leedahay dulsaar ay u leedahay alaabooyinka hantidoodu ay ka badan tahay inta caadiga ah. Sababtoo ah maadooyinka cagaaran ee dabiiciga ah iyo dabiiciga ah, malab duur joogta ah ayaa badanaa loo isticmaalaa ujeedooyin daaweyn.
Qodobo waxtar leh oo malab duurjoog ah
Tani macquulkan dabiiciga ah ee aan caadiga ahayn wuxuu leeyahay saameyn wax ku ool ah jirka bini'aadamka. Saameynta wanaagsan waa:
saarista falcelinta bararka;
hagaajinta kaabayaasha dhiigga iyo kor u qaadista wareegga dhiigga;
caadeysiga habka dheefshiidka caloosha;
hagaajinta dheef-shiid kiimikaad;
dib u soo celinta gallbladder iyo beerka;
hagaajinta nidaamka jimicsiga;
kordhinta xoogga iyo cufnaanta xididdada dhiigga;
xoojinta murqaha wadnaha;
gaabinta da'da jirka;
sii kordhaya waxqabadka antitumor.
Beeraha duurjoogta ah ee hantida faa'iido leh waxaa loo isticmaalaa inay la dagaallamaan hargabka iyo qabow. Daawadan dabiiciga ahi waxay caawineysaa in ay ka adkaato cunaha xanuunka, waxay sahlaysaa xaaladda guud ee bukaanka. Noocyada kala duwan ee nafaqada ee malabku waxa uu buuxiyaa jirka bini'aadamka oo leh fitamiino iyo macdano lagama maarmaan ah.
Waa muhiim! Marka lala xiriirayo malab duurjoog ah oo leh birta dhamaantiis guryaha hantida leh way lumayaan.
Goorta la qaato malab yaab leh
Malab digaaggu waa alaabo qiimo leh, waana muhiim in la ogaado sida ay faa'iido u leedahay. Malaha xayawaanka ayaa noqon doona kaaliye aad u qaali ah cudurada sida:
jahawareerka caarada, kelyaha iyo beerka;
dhibaatooyinka kaadimareenka iyo cudurada dumarka;
malab duurjoogta ah ayaa saameyn togan ku leh kansarka;
haddii ay dhacdo dhibaatooyin leh habka dheef-shiidka iyo dheef-shiid kiimikaad.
Sida loo qaato, gaar ahaan isticmaalka malab
Qaadashada malab duurjoogta ah, iyada oo la ogsoon yahay hantideeda faa'iido leh, way kala duwanaan kartaa, waxay dhammaan ku xiran tahay sababta qaadashada. Haddii aad jeceshahay malab this, ka dibna ma jiraan xeerar gaar ah, kaliya cun oo ku raaxee. Haddii aad qaadato malab si aad uga takhalusto cudurka, markaa waxaad u baahan tahay inaad raacdo farsamooyinka qaar. Tusaale ahaan, hargabyada waxaa lagula talinayaa in lagu diyaariyo faleebo dhalatada ah iyadoo lagu darayo malab duurjoog ah. Faleebo Tani waxaa lagu qasi karaa hal qaado oo ku jira galaas biyo ah oo cabitaan ka hor wakhtiga jiifka. Haddii ay dhibaato kaa haysato nasopharynx, ka dibna ku shub hal shaaha oo malab ah. Haddii ay dhacdo dhibaatooyin la xiriira mareenka caloosha iyo mindhicirka waxaa lagu talinayaa in ay qaaddo qaaddo malab ah calool madhan.
Ma taqaanaa? Qiyaasta lagu taliyey ee malabkeedu yahay qof weyn waa 100 g, ilmaha ilmekiisu waa 50 g.
Sida loo kala saaro malab duurjoogta ah marka aad iibsaneyso
Malabaha Honeycomb waa qaali. Marar badan ganacsatada nacaybka badani waxay isku dayaan inay iska iibiyaan midda caadiga ah ee malab duurjoogta ah. Sidaa darteed, markaad ka fekereyso inaad iibsato malab guduud, waa muhiim in la ogaado waxa ay tahay. Tilmaamaha:
midab qurux badan oo hodan ah;
malab duurjoog ahi waa dherer (dhibic ah kuma fidi doonto);
macaan qaas ah oo la xayiray tartan;
caro aan la qallajin karin (shimbiraha cagaarka ah, qoraallada qoryaha leh).
Haddii, marka aad iibsaneyso malabta isku dhejiska ah, waxaad ogaaneysaa inay leedahay dareeraha dareeraha ah, oo ur ah, waxay la mid tahay malab caadi ah malab, hubi in ay tahay malab caadi ah, oo aan ahayn daweyn dhab ah ee guntimaha. Dabcan, habka ugu kalsoonida leh ee lagu xaqiijin karo xaqiiqda malabku, waxay ku wici doontaa caawinta bortnik khibrad leh.
Sidee ayaad adigu u heli kartaa adigoo isweydaarsanaya, iyo in tani ay u baahan tahay
Honey waxaa laga soo ururiyaa shinnida duurjoogta si toos ah oo ka soo jeeda meel ay ku nool yihiin. Nidaamkan waxaa la yiraahdaa "bernic". Beeraha duurjoogta ah, oo ka duwan qaraabadooda qaaska ah, waxay si gaar ah u xoog badan yihiin. Markaad uuraysatid aruurinta duurjoogta ah, waxaa muhiim ah in laga taxadaro.
Ma taqaanaa? Bort waa meel bannaan oo ay ku jiraan shinnida duurjoogta ah.
Si aad u hesho malab duurjoog ah, beekeepers si fudud u cabbaan shinni, sigaar cabbin guryahooda. Waxaa fiican inaad dhar gashato dharka si gaar ah loogu talagalay beekeepers kuwaas oo aan lagugu qaniinin.
Habka fiirinta malab digaaga
Sidee loo abuuraa beekeepers inay abuuraan deegaannada beeska. Waxay ka qulqulayaan geedo qiyaas ahaan 5 mitir oo kala ah. Guddiga waxaa lagu meeleeyaa meel fog oo mitir ilaa dhowr kiilomitir. Caanaha lo'da shimbiraha ayaa dhuuqaya rashka ka soo baxa guddiga, ka dibna waxa soo ururiya alaabta qiimaha leh gacanta. Unugyada la soo saaro lama geli karo furaha malabaha maskaxda, sidaas darteedna wuxuu sidoo kale u leeyahay in uu cadaadiyo malab. Qaadashada malab ka mid ka mid ah rugta, wuxuu u tegi doonaa kale, u dhaqaaqaya faras ama lugta.
Waa muhiim! Marnaba ma qaadi karto dhammaan malabkii! Haddaad malabta oo dhan ka qaadatid shinni, waxay ku dhiman doonaan xilliga jiilaalka.
Malab digaag iyo duni casri ah
Malab duur ah ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee cayayaanka. Xayawaanka qoyan waxay ka buuxinayaan malab dabiici ah oo dabiici ah oo aan caadi ahayn oo aanad heli karin malab guri. Dabcan, adduunka casriga ah, oo waxay u egtahay, in keynta nadiif ah, waxaad ka heli kartaa wax badan oo wasakh ah iyo qashinka kiimikada. Laakiin qof walba farxadkiisa, tani waa dhif iyo naadir. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqda murugada ah ayaa weli ah in shinnida duurjoogta ah ay sii yaraanayso sannad kasta. Beeraha xayawaanku waxay ku qoran yihiin Buugga Cas, sababtoo ah waxay yihiin wax aad dhif u ah, cayayaanka ku dhow digaaga.
La shaqaynta shinnida duurjoogta ah waa inay ahaato mid aad u taxadar leh, waa muhiim in la ogaado sida loo helo malab duurjoog ah, si aanay u waxyeelayn. Ka dibna waxaad ku raaxeysan kartaa macmacaan cajiib leh oo faa'iido leh oo aad ku farxi karto.